China Kumiswa Uye Kutungamira Knuchles Zvikamu-Z5020 vagadziri uye vanotengesa | TANGRUI
OEM 30639780 uye 30639781 C ...
Kumiswa Uye Kutungamira Kn ...
High Quality Chitubu Shock A ...
Factory Yakatungamira Yekutengesa Bhora ...
Kuturika Uye Kutungamira Knuchles Zvikamu-Z5020
Zvikamu zveSteering Knuckle Assembly
Zvigadziko zvekutambisa zvinobatanidza zvikamu zvekutungamira uye zvekumisa. Nekudaro, iwo ane zvikamu zvekubatanidza zvikamu nemagungano ese ari maviri ekumisa uye ekutungamira masisitimu. Vhiri, zvakare. Zvikamu zvakakura zvekufambisa zvinosanganisira
Kuisa pamusoro pebhora mabheyaringi kana gomba rehanga
Kuisa ruoko rwekumusoro rwekudzora mufuremu kuturika uye strut yeMacPherson yekumisa mhando
Kuisa tambo yetayi kana ruoko rwekutungamira
Kuisa bhora rakabatana kana kudzora ruoko
Points dzekubatanidza brake calipers
Dhirowaamu yekumusoro pamusoro inoratidza zvikamu izvi. Ziva kuti chinhu ichocho chinogona kuve saizi dzakasiyana uye zvimiro. Iyo vhezheni iri mumotokari yako inogona, nekudaro, kuve yekutaridzika kwakasiyana kubva kune iyo iri mumufananidzo. Iyo yakajairwa dhizaini inoramba yakafanana, hazvo, zvinoenderana nerudzi rwechigunduru.
Iyi knuckle yekukwenenzvera yakanyatsogadziriswa uye yakanyatso kuyedzwa kuti ipe yakavimbika kutsiva yeiyo yekutanga knuckle pane chaiwo mota.
Kutsiva chaiko - iyi gogo rakagadzirirwa kutsiva iro rekutanga knuckle pane chaiwo mota
Yakavimbika kukodzera - chaiyo-yakagadzirirwa kuti ienzane nehukuru hwezvinhu zvekutanga
Kuvaka kwakavimbika - kwakagadzirwa nematanho akasimba uchishandisa zvinhu zvinogara
Rigorously kuyedzwa - yakakwana mhando yekudzora matanho anovimbisa hurefu
Chii chinonzi mhando yemhando yepamusoro yekufambisa?
Paunenge uchitenga yako yekutsiva steering knuckle, iwe unoda yakanakisa mhando. Zvakare, iyo inokodzera yako mota mhando uye modhi. Funga nezvezvinhu izvi.
Kana huremu isiri nyaya, chibhakera chesimbi chinofanira kuita. Zvikasadaro, iwe unogona kubatsirwa nehuremu hushoma hwealuminium. Dzinokwana mota dzinowanzo kuda zvinhu zvisina kuremerwa, nepo kugona kutsungirira kukuvara kuchinyanya kudikanwa kune dzinorema mota.
Steering knuckles anowanzo kuvakwa kuti akwane chaiwo mota. Saka nekudaro, iwe unofanirwa kusarudza chete zvinoenderana nezvinodiwa nemotokari yako. Auto zvikamu vatengesi vanogona kukubatsira kusarudza chaicho. Paunenge uchitenga online, ita ruzivo rwemota yako kuti utsvage iyo yakasimba knuckle.
Mamwe makonki akaoma kuisa nepo mamwe achigona kuiswa seye DIY basa. Mhando dziri nyore-dzekuisa dzinosanganisira idzo dzinouya dzakatoungana. Kana iwe uchifunga kuita iyo yekufambisa knuckle kutsiva iwe pachako, sarudza yakakodzera kwazvo mhando.
Kana iwe uchityaira mumamiriro ezvinhu akaomarara, iwe unozobatsirwa kubva kune rakadzivirirwa zvakanaka. Chinhu ichocho chinogona kuve nemagumo akasiyana, ayo anosiyanawo pane akasiyana vagadziri. Iyo chaiyo yemamiriro ako akakosha kuti ipe ngura kuchengetedza.
Saizi OEM mureza
Mashoko --- Simbi yesimbi --- Cast-aluminium-- Kanda mhangura-- Ductile iron
Garandi 3years / 50,000km
Chitupa ISO16949 / IATF16949
Pashure: Kutungamira Knuchles YeVolkswagen Beetle -Z2490
Zvadaro: Oem 42200-SR3-A02 Uye 42200-SR3-A52 Wheel Hubs-Z8040
Kupisa Tengesa Yakakwira Yakakwira mhando Wheel Hub-Z8055
Professional Factory gadzira pena peening L ...
Yakakwira Hunhu hwemashure Wheel Hub Ye Suzuki-Z8047
High Quality Auto Parts Ball Joint For NISSAN-Z ...
Auto Spare Zvikamu Joint Ball Direction Machine D ...
Wholesale fekitari uye bhatiri
Mberi Kudhiraivha Gonhi, Shock Yekupinza Rubber, Wheel Hub, Hood Shock Inotora, Tire Bhora Rakabatana, Shock Inotora Bolt,